“မွေးနေ့ရှင်၏နာမတော်” | Shwe Canaan TV
ဤလောက၌လူတယောက်မွေးလာပြီဆိုလျှင်၊နေ့နာမ်ကိုအမှီပြုပြီး၊ခင်ပွန်းတပ်လေ့ရှိသည်။အမည် နာမ မရှိသောလူသားဟူ၍မရှိ။ တချို့နာမည်များမှာ အချိန်ရာ...
ဤလောက၌လူတယောက်မွေးလာပြီဆိုလျှင်၊နေ့နာမ်ကိုအမှီပြုပြီး၊ခင်ပွန်းတပ်လေ့ရှိသည်။အမည် နာမ မရှိသောလူသားဟူ၍မရှိ။ တချို့နာမည်များမှာ အချိန်ရာသီများကိုကြည့်ပြီးမှည့်ကြသည်။ကျွန်ုပ်တူတစ်ယောက်မုန်တိုင်းကျနေသောကာလမှာမွေး၍“ ခိုမိူ” (မုန်တိုင်းတေ့ွသူ)ဟုမှည့်ထားသည်။ တချို့ကရာသီပန်းများကိုအမှီပြုပြီးမှည့်ကြသည်။ မလီလီ၊ မနှင်းဆီ၊မချယ်ရီ စသဖြင့်မှည့်ခေါ်ကြသည်။တချို့မှာ၊ ဇာတိသွေး၊ဇာတိမာန်၊မျိုးချစ်စိတ်များကိုထင်ပေါ်အောင် နာမည်ပေးကြပြန်သည်။အာဇာနည်၊ရဲကျော်သူ၊သူရမြင့်မောင်၊မောင်မျိုးချစ် စသဖြင့်မိမိဂုဏ်ရာထူးများကိုထုတ်ဖော်ပြီး မှည့်ခေါ်ကြသည်။
သို့သော် အရှင်ယေရှု မှာမူ မွေးဖွါးပြီးမှ၊နာမည်များမှည့်ခေါ်သည်မဟုတ်ပါ။ မမွေးဖွါးမှီနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကပင်၊ဘယ်မှာမွေးမည်၊ဘယ်လိုမွေးမည်၊နာမည်ဘယ်လိုမှည့်မည်ကိုကြိုတင် ဟောကိန်းထုတ်ထားခဲ့လေသည်။အရှင်ယေရှု၏နာမများသည် သူ၏ဂုဏ်တော်များကိုဖေါ်ညွှန်းလျက်ရှိသည် (၇၄၀-၆၈၀ B .C.)အတွင်းပရောဖက်ဟေရှာယ ကကယ်တင်ရှင်ယေရှုမွေးလာမည့်အကြောင်းကြိုတင်မရောဖက်ပြုခဲ့သည်။
ပဌမ နာမတော် သည် “အံ့သြဘွယ်” ဖြစ်သည်။ အံ့သြဘွယ်၏ဆိုလိုရင်း အဓိပ္ပါယ်မှာ“Supernatural” (တရားသူကြီး ၁၃း၁၈)။ သဘဝထက်လွန်ကဲသောဟူ၍ဖြစ်သည်။အရှင်ယေရှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကြည့်လျှင် လေမုန်တိုင်းကိုငြိမ်းစေခြင်း(မာကု၄း၃၉)ရေပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ခြင်း(မဿဲ၁၄း၂၆)၊နတ်ဆိုးများကိုနုင်ထုတ်ခြင်း(၅း၁-၁၀)၊ကန်းသောသူကိုမြင်စေခြင်း(ယော၉း၁-၇) သေသောသူကိုရှင်စေခြင်း (ယော၁၁း၄၃-၄၄)မုန့်ငါးလုံးနှင့်ငါးနှစ်ကောင်ဖြင့်လူထုငါးထောင်ကျော်ကိုကျွေးမွေးနိုင်ခြင်း(မဿဲ၁၄း၁၉-၂၁)တို့သည်(Supernalural power) သဘာဝထက်လွန်ကဲသောတန်ခိုးများသာဖြစ်လေသည်။
ဒုတိယ နာမတော် မှာ “တိုင်ပင်ဘက်” ဖြစ်သည်။တိုင်ပင်ဘက်။ အဓိပ္ပါယ်မှာ(adviser)အကြံအဉာဏ်ပေးနိုင်သူဖြစ်သည်။ တန်းခိုးတော်၊ဉာဏ်တော်နှင့်ပြည့်စုံ၍ မှားသောနှင့် မှားစေသောသူတို့ကိုပိုင်တော်မူ၏။တိုင်ပင်မှုုး မတ် တို့ကိုဘမ်းဆီးသိမ်းသွားတော်မူ၏။ တရားသူကြီးတို့ကိုရူးးသွပ်စေတော်မူ၏။ တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုချီးမြောက်၍တဖန်ဖျက်ဆီးတော်မူ၏။ တိုင်းနိုင်ငံတို့ကိုကျယ်စေခြင်းငှာ၎င်း၊ပြုတော်မူ၏(ယောဘ ၁၂း၁၆-၁၇,၂၃)။ ထာဝရဘုရားသည်၊ငါတို့၏တရားသူကြီးဖြစ်တော်မူ၏။ ထာဝရဘုရားသည်ငါတို့ပညတ်တရားရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ (တရားသူကြီး ၃၃း၂၂)။အရှင်ယေရှု၏နာမသည် တိုင်ပင်ဖက်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရာ၌၊ထိုနာမပိုင်ရှင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်၊ ယနေ့၊မနေ့နောင်ကာလအသက်ရှင်လျက်ရှိသောကြောင့်၊ အဘယ်သို့သောအမှု့ကိစ္စမျိုးမဆိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး၍ရသည်။အဖြေမှန်ရရန်၊ အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်သောတန်ခိုးနှင့်နည်း လမ်းများကိုလည်းပေးပိုင်သောအရှင်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးသည် စစ်မတိုက်မှီ၊စစ်တိုက်လျှင်အောင်မည် ရှုံးမည်ကိုဘုရားရှင်အားတိုင်ပင်လေ့ရှိပါသည်။(၁ရာ ၂၉း၈)။ထိုအတူယုဒဘုရင်ယေရုဖတ်သည်လည်းစစ်မူအတွက် ဘုရားသခင်ကိုတိုင်ပင်ခဲ့သည်။(၃ရာ ၂၂း၁၅-၂၈)။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ…သင်သည်၊အမူကစ္စအ၀၀အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်မချမှီ၊ဘုရားသခင်ကို ယေရှုနာမဖြင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ထံမှတိကျသောအဖြေရမှသာလုပ်ဆောင်ပါ။
တတိယ နာမတော် “တန်ခိုးကြီးသောဘုရားသခင်” ။ အဓိပ္ပါယ်မှာ တုနိုင်းလို့မရသောဘုရားသခင်၊ ဘုရားတို့၏ဘုရား၊ သခင်တို့၏သခင်၊ ကြီးသောဘုရား၊တန်ခိုးနှင့်ပြည့်စုံ၍ကြောက်မက်ဘွယ်သောဘုရား၊ လူမျက်နှာကိုမထောက်၊တံစိုးကိုမစားဘဲ၊မိဘမရှိသောသူငယ်မုတ်ဆိုးမဘက်၌တရားစီရင်၍၊ဧည့်သည်အာဂန္တုတို့ကိုစုံမက်သဖြင့်၊အဝတ်အစားတို့ကိုပေးသနားသောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏(တရား ၁၀း၁၇-၁၈)။အရာခပ်သိမ်းကိုတတ်နိုင်တော်မူသောဘုရားဖြစ်ကြောင်းကိုဖေါ်ပြထားပါသည်။ ထို့ကြောင့်မိတ်ဆွေအနေဖြင့်လက်ရှိကြုံတွေ့နေသော၊ပြသနာအခက်ခဲများအတွက် ယေရှုနာမဖြင့်ဆုတောင်းပါက၊ဧကန်မုချ အဖြေရပေလိမ့်မည်။
စတုတ္ထနာမတော် “ထာဝရအဘ” ၊ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်မှာ၊ မပြောင်းမလဲတည်ရှိတော်မူသော၊ထာဝရအဘဟုအဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ တဖန်ကျမ်းစာလာသည်ကား၊အိုထာဝရဘုရားကိုယ်တော်သည် ရှေးဦးစွာ၌မြေကြီးကိုတည်တော်မူပြီ။ မိုးကောင်းကင်သည်လည်း၊လက်တော်နှင့်ဖန်ဆင်းသောအရာဖြစ်ပါ၏။ထိုအရာတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်သော်လည်း ကိုယ်တော်သည်အမြဲတည်တော်မူ၏(ဟေဗြဲ ၁း၁၀-၁၂)။ ခပ်သိမ်းသောငါတို့၏အဘဖြစ်တော်မူသော ဘုရားသခင်တဆူတည်းရှိတော်မူ၏(ဧဖက် ၄း၆)။ အိုထာဝရဘုရား၊ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့အဘ ဖြစ်တော်မူ၏ရှေ့ကာလမှစ၍ ကျွန်ုပ်တို့ကိုရွေးနှုတ်သောဘုရားဖြစ်တော်မူ၏(ဟေရှာယ ၆၃း၁၆)။ ထို့ကြောင့် ယေရှုနာမတော်သည် ထာဝရအဘဖြစ်သောကြောင့် ကောင်းကင်သတ္တဝါ၊မြေကြီးသတ္တဝါ၊ မြေကြီးအောက်၌ရှိသောတသတ္တဝါ၊တည်းဟူသော ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့သည်၊ ယေရှု၏ဘွဲ့နာမတော်ကိုဒူးထောက်၍၊ယေရှုခရစ်သည်၊သခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုနှုတ်နှင့်ဝန်ခံသဖြင့် ခမည်းတော်ဘုရားသခင်၏ဘုန်းအသရေတော်ကိုထင်ရှားစေကြမည် အကြောင်းတည်း(ဖိလိပ္ပိ ၂း ၁၀-၁၁)။သို့ဖြစ်၍အရာခပ်သိမ်းအပေါ်မှာ၊ အခွင့်အာဏာ၊ အုပ်စိုးခြင်းတန်ခိုးရှိတော်မူသော၊ယေရှုခရစ်ကို၊ကိုးကွယ်ကြကုန်အံ့။
ပဉ္စမနာမတော် “ငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်” ဆိုသည်မှာ၊ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်က၊ ငြိမ်သက်ခြင်းကိုပေးပိုင်သောအရှင်ဖြစ်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ လူနှင့်ဘုရားသခင်သည်၊အာဒံ၏ကျူးလွန်ခြင်းကြောင့် ရန်သူဖြစ်ခဲ့ပြီး(ရောမ ၅း၁၀)။ သန့်ရှင်းသောဘုရားနှင့်သင့်မြတ်အောင်လူသည်မတတ်နိုင်(ဂလာတိ၃း၁၃)။ သို့သော်ဘုရားသခင်သည် ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ငါတို့၏ရန်ကိုငြိမ်းစေ၍ ကိုယ်တော်နှင့်မိဿဟယဖွဲ့စေတော်မူ၏(၂ကော၅း၁၈)။ ထို့ကြောင့်ငါတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းရှိ၍ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လျှင်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ဘုရားသခင်ရှေ့ တော်၌ငြိမ်သက်ခြင်းကိုခံစားကြ၏(ရောမ ၅း၁)။
ဤငြိမ်သက်ခြင်းသည်၊လောကီသားတို့ပေးသောငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ခရစ်တော်ပေးသောငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ရှေ့မှောက်ရောက်သွားသည်တိုင်အောင်၊ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်စရာမလို။ စိတ်နှလုံးပုူပန်စရာမရှိ။ အပြစ်စီရင်ခြင်းနှင့်လုံးဝကင်းလွတ်မည့်ငြိမ်သက်ခြင်းမျိုး၊ဘယ်အချိန်ဘဲသေသေ၊ငရဲမကျရတော့ဘူးဟူသောအတွင်းငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးဖြစ်လေသည်။ထို့အပြင်၊ခရစ်တော်ပေးသောငြိမ်သက်ခြင်းကိုရသောသူသည်၊နောင်ဘဝအတွက်စိုးရိမ်စရာမရှိသည်သာမက ယခုဘ၊စားဝတ်နေရေးအတွက်လည်းပူပန်စရာမလို။ လိုအပ်သောအချိန်မှာ၊လိုအပ်သောအရာကို၊ဘုရားသခင်က မစ မည်ကိုစိတ်ချနိုင်သောငြိမ်သက်ခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်(ယော ၁၄း၂၇)။
အဌမ နာမတော် “ဧမာနွေလ”။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်ပေသည်။ ယေရှုခရစ်သည်၊နေရာ၊အပိုင်းအခြားတစ်ခုထဲမှာနေသောဘုရားမဟုတ်။နေရာတိုင်းမှာ၊ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူသောဘုရားဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့်ဘယ်ဒေသ၊ဘယ်နေရာမှာ၊နေထိုင်သည်ဖြစ်စေ၊မိတ်ဆွေနှင့်အတူရှိသောဘုရားဖြစ်သည်။ ဘုရားကျောင်း၌သာရှိသောဘုရားမဟုတ်၊မိတ်ဆွေ၏အလုပ်ခွင်မှာ၊မိတ်ဆွေ၏ သွားလေရာရာမှာရှိသောဘုရား၊ ထောင်ထဲမှာရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ဆေးရုံမှာနေသည်ဖြစ်စေ၊ လူဆိုးတို့၏လက်ထဲမှာရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ မိတ်ဆွေနှင့်အတူရှိသောဘုရားဖြစ်ပေသည်။ထို့ကြောင့်အရှင်ယေရှု၏နာမတော်၊အာနိသင်ကိုသိပြီဆိုလျှင်၊သစ္စာနှင့်ပဌနာပြုကြည့်ပါ။ ထာဝရဘုရားသည်၊ပဌနာပြုသောသူအပေါင်း၊သစ္စာနှင့်တကွပဌနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏အနီးအပါး၌ရှိတော်မူ၏(ဆာလံ ၁၄၅း၁၈)။
ချစ်စွာသောဓမ္မမိတ်ဆွေ….ယခုနှစ် ခရစ်တော်၏မွေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာ(Christmas)မှာ မွေးနေ့ရှင်၏နာမများကို သိခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတော်ကြီးလှပါ၏။ ဤအချိန်ခါသမယမှာပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အသောက်အစားဖြင့်အချည်းနှီးအချိန်မကုန်စေဘဲ၊ပျောက်ဆုံး ဝိညာဉ်ကယ်တင်ရေးအတွက် အသုံးပြုပါ။ မွေးနေ့ရှင်၏အမည်နာမ၊အာနိသင်၊ အကျိုးကျေးဇူးများကိုဖော်ပြခဲ့ပြီ။
လူသည်၊ကိုယ့်အားကိုကိုးစားသောသတ္တဝါဖြစ်၏။သူတပါးအကူအညီကိုရယူဘို့၊ သိက္ခာကျသည်ဟုထင်တတ်သော လူစားမျိုးဖြစ်သည်“ရသလား”ဟုမေးလျှင် မရ- ဒါလည်း ရတယ်-ရတယ်”ဟူ၍ဟန်ဆောင်တတ်သောသတ္တဝါဖြစ်သည်။ အမှန်မှာလူ၏တတ်စွမ်းနိုင်ခြင်းသည်အကန့်အသတ်ရှိ၏။(ဥပမာ)ဆယ်ပေခုန်နိုင်သူရှိသော်လည်းပေ၁၀၀၀ခုန်နိုင်မည့်သူမရှိပါ။ထို့ကြောင့်လူသည်၊မတတ်နိုင်သောအရာမှာ၊မစမည့်သူ၊ကူမမည့်သူ၊ကယ်တင်မည့်သူကိုရှာရပေလိမ့်မည်။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ၊နောင်ရေးအတွက်စိတ်ပူနေပါသလား?။ ဒါမှမဟုတ် မိမိကုသိုလ်၊ အကျင့်သီလအားဖြင့်ကောင်းရာရောက်ဘို့မသေချာ၊မရေရာဖြစ်နေပါသလား။ မိတ်ဆွေအတွက် သတင်းကောင်းတခုပါးချင်ပါသည်။ ထိုသခင် (ယေရှု)၏နာမတော်မှတပါး၊ငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သော နာမတစုံတခုမျှ ကောင်းကင်အောက်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဟုကျမ်းစာကဆို၏(တ ၄း၁၂)။ သခင်ယေရှု၏နာမသည် အပါယ်ငရဲမှကယ်တင်နိုင်သော“တခုတည်းသော နာမတော်”ဖြစ်ပါ၏။
လူအပေါင်းတို့ကိုအစိုးရသော အရှင်တပါးတည်းရှိ၍၊ကိုယ်တော်ကိုဌနာပြုသောသူရှိသမျှတို့သည် ကယ်တင်မူခြင်းသို့ရောက်ရကြလတံ့(ရောမ ၁၀း၁၂-၁၃)။
ချစ်သောဓမ္မမိတ်ဆွေ….အရှင်ယေရှု၏နာမကို သိရုံနှင့်မပြီးပါ။ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်ခြင်းနှင့်အသုံးချပါ။သစ္စာဖြင့်ပဌနာပြုကြည့်ပါ။ ဧကန်အမှန်အကျိုုးတစုံတခုရရှိပေလိမ့်မည်။ ငါတို့သခင်ယေရှု၏ကျေးဇူးတော်သည်သင်တို့အပေါင်း၌ရှိစေသတည်း။(အာမင်)…
Rev.Dr.Paul Khay Kyaing.
Shwe Canaan TV: “မွေးနေ့ရှင်၏နာမတော်”